Hyundai Sonata 2017 (#710828) ကို Chanayethazan ၿမိဳ့နယ္တ... | CarsDB
Lot Number: #710828
Mid Size Luxury Sedan ကားလေးဖြစ်တဲ့ Hyundai ရဲ့ သတ္တမ မြောက်မျိုးဆက် Sonata လေးရောင်းချင်ပါတယ်။ Sonata ရဲ့Design နှင့် အရည်အသွေးကတော့ အထူးပြောစရာမလိုအောင်ဆုများက သက်သေပြနေပါတယ်
-၂၀၁၆ The Car Book ကချီးမြှင့်တဲ့ Best Bet ဆု (အမေရိကန်)၊
-Kelly Blue Book က ချီးမြှင့်တဲ့ ၂၀၁၆ Best Family Cars ဆု (အမေရိကန်)၊
-TOP SAFETY PICK+ (IIHS, အမေရိကန်)၊
-၂၀၁၇ Best Economic Performance- full Size Sedan category (Automotive Science Group, အမေရိကန်)
-၂၀၁၇ J.D. Power VDS Nameplate Ranking- Midsize Car Segment ဒုတိယဆု (J.D. Power, အမေရိကန်) စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Sonataရဲ့လေ၀င်ပေါက်ကိုဆဌဂံပုံပြုလုပ်ထားပြီး ဘော်ဒီဒီဇိုင်းနဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်နေသလို ကျော့ရှင်းတဲ့အသွင်ကိုလည်း ပေးစွမ်းပါတယ်။
HID ရှေ့မီးကြီးတွေဟာ ကားရှေ့ကလမ်းကို တိကျပြတ်သားပြီး ပြင်းအားမြင့်အလင်းရောင်ထိုးပေးပါတယ်။
အပူအအေး အော်တိုလေအေးပေးစနစ်ကြောင့် ကားရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကစီးနင်းသူတွေဟာ စိတ်ကြိုက်အပူချိန်တစ်ခုစီ သတ်မှတ်နိုင်သလို အေးအေးမြမြလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပါတယ်။
အပြင်ကနေ ကားထဲကိုမမြင်စေချင်တာပဲဖြစ်စေ နေရောင်ကိုကာထားချင်တာပဲဖြစ်စေ နောက်ခန်းဘေးမှန်ကနေကာကို ဆွဲတင်၊ ဆွဲချ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကားနောက်ဘက်လေကာမှန်အတွက် နေကာကိုတော့ ခလုတ်နှိပ်ပြီး အတင်အချပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယာဉ်မောင်းစိတ်ကြိုက်စတီယာရင်အလေးအပေါ့နဲ့ ယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး Normal ၊ Sports နဲ့ Eco ဆိုပြီး မတူတဲ့ မောင်းနှင်မှုပုံစံသုံးမျိုးရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့် ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူမှုကိုပေးစွမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဖုံးကိုဖွင့်ဖို့လက်မအားဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် တော့ ကားသော့ကိုင်ပြီးကားနောက်ဖုံးနားမှာ ၃ စက္ကန့်ရပ်နေရုံနဲ့ နောက်ဖုံး အလိုအလျောက်ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိုးရွာသွန်းမှုအာရုံခံကိရိယာက မိုးသည်းမသည်းကို အလိုအလျောက် အာရုံခံပေးသလို လေခွင်းအားကောင်း၀ိုက်ပါတွေက ၀ိုက်ပါအမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်းပေးပြီး အရှိန်မြင့်ကားမောင်းတဲ့အခါ ၀ိုက်ပါတွေလေနဲ့မြောက်တက်မသွားစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ကားလားရာအတိုင်းချိုးကွေးသွားသည့် (SBL) မီးများ
ကုန်းစောင်းမောင်းနှင်မှုအထောက်အကူပြု (HAC) စနစ်
Digital Air Con (Dual Zone) နောက်ခန်း Air Con လည်းပါ
Parking Sonar ပါတ်လည်
လေအိတ် (၆) လုံးပါ စနစ် တို့ကြောင့် လုံခြုံရေးမှာတော့ ထိပ်တန်းအဆင့်ပေးစွမ်းနိုင်သော First Owner အမည်ပေါက် ကားကောင်းတစ်စီးကို
လက်ငင်း/အရစ်ကျ အဆင်ပြေသလို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Mid Size Luxury Sedan ကားလေးဖွဈတဲ့ Hyundai ရဲ့ သတ်တမ မွောကျမြိုးဆကျ Sonata လေးရောငျးခငြျပါတယျ။ Sonata ရဲ့Design နှင့ျ အရညျအသှေးကတော့ အထူးပွောစရာမလိုအောငျဆုမြားက သကျသပွေနပေါတယျ
-၂၀၁၆ The Car Book ကခြီးမွှင့ျတဲ့ Best Bet ဆု (အမရေိကနျ)၊
-Kelly Blue Book က ခြီးမွှင့ျတဲ့ ၂၀၁၆ Best Family Cars ဆု (အမရေိကနျ)၊
-TOP SAFETY PICK+ (IIHS, အမရေိကနျ)၊
-၂၀၁၇ Best Economic Performance- full Size Sedan category (Automotive Science Group, အမရေိကနျ)
-၂၀၁၇ J.D. Power VDS Nameplate Ranking- Midsize Car Segment ဒုတိယဆု (J.D. Power, အမရေိကနျ) စတာတှဖွေဈပါတယျ။
Sonataရဲ့လေ၀ငျပေါကျကိုဆဌဂံပုံပွုလုပျထားပွီး ဘောျဒီဒီဇိုငျးနဲ့တဈသားတညျးဖွဈနသေလို ကြော့ရှငျးတဲ့အသှငျကိုလညျး ပေးစှမျးပါတယျ။
HID ရှေ့မီးကွီးတှဟော ကားရှေ့ကလမျးကို တိကပြွတျသားပွီး ပွငျးအားမွင့ျအလငျးရောငျထိုးပေးပါတယျ။
အပူအအေး အောျတိုလအေေးပေးစနဈကွောင့ျ ကားရဲ့ဘယျဘကျနဲ့ညာဘကျကစီးနငျးသူတှဟော စိတျကွိုကျအပူခြိနျတဈခုစီ သတျမှတျနိုငျသလို အေးအေးမွမွလိုကျပါစီးနငျးနိုငျပါတယျ။
အပွငျကနေ ကားထဲကိုမမွငျစခေငြျတာပဲဖွဈစေ နရေောငျကိုကာထားခငြျတာပဲဖွဈစေ နောကျခနျးဘေးမှနျကနကောကို ဆှဲတငျ၊ ဆှဲခြ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ကားနောကျဘကျလကောမှနျအတှကျ နကောကိုတော့ ခလုတျနှိပျပွီး အတငျအခပြွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ယာဉျမောငျးစိတျကွိုကျစတီယာရငျအလေးအပေါ့နဲ့ ယာဉျမောငျးနှငျတဲ့အခွအေနပေေါျမူတညျပွီး Normal ၊ Sports နဲ့ Eco ဆိုပွီး မတူတဲ့ မောငျးနှငျမှုပုံစံသုံးမြိုးရှေးခယြျခှင့ျပေးထားသောကွောင့ျ ပိုမိုအဆငျပွလှေယျကူမှုကိုပေးစှမျးမှာပဲဖွဈပါတယျ။
နောကျဖုံးကိုဖှင့ျဖို့လကျမအားဘူးဖွဈနတေယျဆိုရငျ တော့ ကားသော့ကိုငျပွီးကားနောကျဖုံးနားမှာ ၃ စက်ကန့ျရပျနရေုံနဲ့ နောကျဖုံး အလိုအလြောကျပှင့ျလာမှာဖွဈပါတယျ။
ECM နောကျကွည့ျမှနျဟာ နောကျကားတှရေဲ့ရှေ့မီးကွီးတှကွေောင့ျ သငျမကြျစိမစူးစဖေို့ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ နောကျကား မီးထိုးတာကို ဒီမှနျက အလိုအလြောကျအာရုံခံပေးပွီး လြှော့ခပြေးပါတယျ။
မိုးရှာသှနျးမှုအာရုံခံကိရိယာက မိုးသညျးမသညျးကို အလိုအလြောကျ အာရုံခံပေးသလို လခှေငျးအားကောငျး၀ိုကျပါတှကေ ၀ိုကျပါအမွနျနှုနျးကို ထိနျးခြုပျးပေးပွီး အရှိနျမွင့ျကားမောငျးတဲ့အခါ ၀ိုကျပါတှလေနေဲ့မွောကျတကျမသှားစဖေို့ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။
အလိုအလြောကျ မွူရှငျးစနဈကွောင့ျ မွူထဲမှာပိုပွီး မွငျနိုငျစှမျးကောငျးစပေါတယျ။ ဒီစနဈက လကောမှနျပေါျမှာရငှေေ့ရိုကျတာကို အလိုအလြောကျ ထောကျလှမျးပေးပွီး လကောမှနျကွညျသှားစဖေို့ ရငှေေ့တှကေိုရှငျးလငျးပေးပါတယျ။
Electronic stability control (ESC) စနဈ
ကားလားရာအတိုငျးခြိုးကှေးသှားသည့ျ (SBL) မီးမြား
ကုနျးစောငျးမောငျးနှငျမှုအထောကျအကူပွု (HAC) စနဈ
အရှေ့နှင့ျအနောကျပါကငျအထောကျအကူပွု (PAS) စနဈ
Digital Air Con (Dual Zone) နောကျခနျး Air Con လညျးပါ
Parking Sonar ပါတျလညျ
လအေိတျ (၆) လုံးပါ စနဈ တို့ကွောင့ျ လုံခွုံရေးမှာတော့ ထိပျတနျးအဆင့ျပေးစှမျးနိုငျသော First Owner အမညျပေါကျ ကားကောငျးတဈစီးကို
လကျငငျး/အရဈကြ အဆငျပွသေလို ဝယျယူရရှိနိုငျပါသညျ။
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Khaing Thin Zaw မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Hyundai Sonata 2017 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။